It kuvela ukuthi ubhanana akuzona kuphela imnandi, lokho sasivame uwabone emakethe yasekhaya. Ziningi izinhlobo nezinhlobo. Ezinye ubhanana kungenziwa kudliwa eluhlaza, kuyilapho ezinye zidinga ukwelashwa ukushisa saziso. Emazweni lapho etshalwa ngendlela yezomnotho e ukudla akuzona izithelo kuphela, kodwa futhi ishiya, futhi ngezinye izikhathi ikhasi. I iminotho kwamanye amazwe kuncike isivuno simila. Empeleni sikhuluma emazweni iseduze nenkabazwe, kusukela lapho ithumela kwamanye amazwe ubhanana. Ukusetshenziswa kwabo akunakuphikwa, kodwa, ngeshwa, ngezinye izikhathi kancane ihaba. Njenganoma iyiphi umkhiqizo ubhanana akuyona kuphela izakhiwo ewusizo, kodwa futhi Izimo ezithile ukusetshenziswa. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba ukudle izinto eziningi ezinkulu, njengoba uya umazi kangcono ngemiphumela kungenzeka.
Izinzuzo ubhanana izingane
Lezi izithelo abacebile amavithamini namaminerali. Kukhona potassium samanje, magnesium, nensimbi kanye nezinye izinto ezinhle. Yonke enye into, ubhanana okunomsoco kakhulu futhi aqukethe uvithamini A, E no-B (cishe ngo-amandla ngokugcwele). Kodwa umbono wokuthi lezi zithelo kulula futhi kuyazuzisa isimiso sokugaya ukudla bungene - akulungile. Empeleni, lo mkhiqizo impela high-calorie nzima ukugaya emathunjini. okuhle kwalo ngoba isisu ukwamukeleka ngaphandle kokungatshazwa, kodwa ezinye izitho akakwazi ukubhekana inqwaba ubhanana.
Ngokuvamile izingane batusa izithelo kusukela zisencane (kuze ukudla kuqala aphelele). Kodwa, ngokusho kwabanye zokudla kanye nodokotela bezingane, akuphephile ngakho for ubhanana umzimba wengane. Izinzuzo ukusetshenziswa yabo, vele, kukhona, kodwa akukuhle ukuba uthole abazali bazibandakanye futhi zihlanganisa nabo ekudleni eliningi ngokuqinile elinganiselwe.
Ngokuqondene esekhulile, Yebo, kuyoba lula ukugaya lesi sithelo. Kodwa ngenxa okuqukethwe kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu carbohydrate ubhanana kufanele kulinganiselwe ukusetshenziswa abantu abanezifo pancreatic, ikakhulukazi isifo sikashukela. Naphezu kweqiniso lokuthi lesi sithelo unothile ngempela futhi okunama-kilojoule amaningi (kungenzeke iqukethe kilojoule afinyelela ku-140), kukhona banana Ukudla ukugqugquzela kwesisindo. Nokho, ochwepheshe batusa ukusebenzisa izithelo kakhulu kanye nokudla okune amaprotheni (lokhu kungaba inyama ebomvu noma ubisi), ngaphinda futhi ngathi, e okulinganiselwe.
Ngenkathi (isib ekwindla) ukucindezeleka athokozise ubhanana. Ukusebenzisa izithelo kulokhu ngokuphindaphindiwe ihlolwe futhi kungase kutholakale empirically - ziqukethe antidepressant zemvelo. Futhi zisiza ukwandisa isibalo abomvu egazi, okuyinto ebaluleke kakhulu ezimweni igazi.
Izinzuzo ubhanana kubagijimi
Abantu ababeka njalo bacindezelekile ngokomzimba, isidingo oyinhlekelele ubuyise amasheya potassium, insimbi kanye amavithamini. Yiqiniso, kungenziwa ngokusebenzisa amavithamini ahlukahlukene zokwenziwa lwezakhamzimba, kodwa hlobo, iyiphi namaminerali ugxile kangcono futhi ulethe izinzuzo eziningi.
Omunye imithombo yamandla abasubathi nabanye abantu phambili ukuphila okumatasa, kukhona ubhanana nje. Iqukethe cishe zonke kunesidingo amavithamini, amaminerali kanye carbohydrate ngenxa awumthombo omuhle kakhulu we-amandla.
Lokho okumnandi kangaka, okunempilo, futhi okubaluleke ubhanana ziyatholakala kubantu abavamile. Ukusetshenziswa kubo Yiqiniso, eziningi, kodwa kwakusekuningi mindlessly adle izinto eziningi angenamkhawulo izithelo akusilo zinkulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene nabantu ukugaya ababuthakathaka nezingane.
Indlela dweba inhlanzi? Indlela dweba a gazinga inhlanzi?
Kungani amaqanda kufanele ekudleni kwakho: 12 Izizathu Okuhle
Amandla iziphuzo: yini ingozi yabo umzimba?
"Intavir": ukubuyekezwa kanye ngokoqobo
Umqondo wendawo ukuzibusa
Qiniseka ukufunda kulo nyaka: izincwadi 9 ukuthi ungashintsha ikusasa lakho
Izikhangibavakashi Turkey. Siphila Ihhotela Kami
Ubukhulu of imishini yokuwasha: ukhethe ezifanele
Imimoya "Mansehra" - Iphunga heady ka Ukwanelisa inkanuko